3A Kuomesa kweGasi Rezvisikwa, HDS yeNaphtha, Yepamberi Alumina Clause Catalyst - Gascheme
Carbon Molecular nesefa (CMS)
Shanghai Gascheme Co., Ltd. (SGC), mutengesi wepasi rose wezvinogadzirisa uye adsorbents. Tichivimba nehunyanzvi kugona kwesosi yedu yekutsvagisa, SGC inozvipira kune inosimudzira, kugadzira uye kugovera zvinokonzeresa uye adsorbents kune zvinonatsiridza, petrochemical uye makemikari maindasitiri. Zvigadzirwa zveSGC zvinoshandiswa zvakanyanya kugadzirisa, hydrotreating, steam-kugadzirisa, sarufa-kupora, hydrogen-kugadzirwa, synthetic gasi, nezvimwe.
Catalysts uye adsorbents vanopa mazano mukuchenesa kwemafuta, petrochemicals uye gasi gadziriso.
R & D mune zvigadzirwa (Zeolites) uye zvinowedzera. R & D mumafuta ekuchenesa kugadzirisa (hydrotreating / hydrocracking / kugadzirisa / isomerization / dehydrogenation) uye gasi rekuchenesa kugadzirisa (chirevo / TGT).
Nyanzvi nyanzvi ine hupfumi zviitiko muR & D uye zvinoshanda kushanda kwezvaunoda.
052020 / Mbudzi
Mhinduro yepamusoro nzira (RSM) yaishandiswa kudzidza iyo nitric acid leaching maitiro emarara Co Mo based hydrotreating catalyst. Chinangwa cheichi ...
Dzidza nezveacid leaching maitiro eCo Mo based hydrotreating catalyst
Mhinduro yepamusoro nzira (RSM) yaishandiswa kudzidza iyo nitric acid leaching maitiro emarara Co Mo based hydrotreating catalyst. Chinangwa chechidzidzo ichi chaive chekuzivisa iyo CO uye Mo kubva kune yakashandiswa yekugadzirisa mune iyo solvent muchimiro chemvura-yakasungunuka, kuitira kuti ifambise iyo inotevera purific ...
Kugadzirira kwekabhoni mamoresi nesefa kubva kabhoni fiber
Kana madhizajujube madonhwe ehuanbingwei neCMB akasanganiswa pamwechete, izvo zvinhu zvitsva zvichave nezvinotevera zvinotevera: hapana guruva rinogadzirwa parinoshandiswa. Inowedzerwa ne5-FU. Carbon fiber mamorekuru sieve ine ion yekugona kugona inogona kugadzirirwa nekuenderera mberi kwemuviri uye kwemakemikari kurapwa. Iyo ...
Zvivakwa uye kushandiswa kweakagadziriswa kabhoni
Yakagadziriswa kabhoni: imhando yeasina-polar adsorbent anoshandiswa zvakanyanya. Kazhinji, inoda kugezwa nehydrate hydrochloric acid, ichiteverwa ne ethanol, uyezve yogezwa nemvura. Mushure mekuomesa pa80 ℃, inogona kushandiswa kwekoramu chromatography. Granular activated kabhoni ndiyo sarudzo yakanakisa yekoramu ch ...
Rm, 102-104, Kuvaka 1, No.1008, DongChangZhi Rd,
Nhare: + 86-021-5119 8971